काठमाडौँको न्युरोड बाट आयो ठुलो खुसीको खबर , भोलि बाट यस्तो नियम लागु हुदै ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौँको न्युरोड बाट आयो ठुलो खुसीको खबर , भोलि बाट यस्तो नियम लागु हुदै !
काठमाडौं । न्यूरोड क्षेत्रका सपिङ मलहरु भोलिदेखि खुल्ने भएका छन् । शनिबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनको नेतृत्वमा सो क्षेत्रका १७ वटा संघसंस्थाबीच भएको बैठकले सो क्षेत्रका सपिङ मलहरु आइतबारदेखि खोल्ने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले जानकारी दिए ।
सो अनुसार भोलिदेखि २२ नम्बर वडाभित्र पर्ने पिपुल्स प्लाजा, रञ्जना मल, आरबी क्म्प्लेक्स, काठमाडौं मल, सिटीसी मल लगायतका सपिङ मलहरु खुला हुनेछन् । शनिबारको निर्णय अनुसार होलसेल पसलहरु बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म र खुद्रा पसलहरु बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म खुला हुन जनाइएको छ ।
तर, त्यसरी खुला हुने पसलमा आउने ग्राहकले संक्रमण जोखिमको सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने, किन्ने वस्तुहरु छुन नपाउने र सामान किन्दै नकिने पनि पसलमा छिर्नेबित्तिकै नाम र सम्पर्क नम्बरको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय वडाध्यक्ष महर्जनले जानकारी बताए ।
सरकारले होलसेल तथा खुप्रा पसल खुला गर्ने निर्णय गरे पनि सपिङ मलहरु भने खोल्न नपाइने भनजेको थियो । यस्तो अवस्थामा वडा नम्बर २२ ले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका मलहरुलाई खोल्ने अनुमति दिएको हो ।
तर वडाध्यक्ष महर्जनले आफूहरुले संघको निर्णय नमानेको नभएर सहजीकरण मात्रै गरिदिन चाहेको बताए । ‘अहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरका नाममा कतिपय स्टोरहरुले गैरखाद्यान्न सामानहरु बेचिरहेका छन् । उनीहर खुल्न हुँदा यी कम्प्लेक्सहरु खुल्न किन नपाउने भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो’ उनले भने ।
महर्जनले आफूहरुले प्रशासन र प्रहरीसँग पनि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत बताए ।
चर्चित गायिका ईन्दिरा जोशीले गरिन् ‘फिल्मी शैली’मा इन्गेजमेन्ट, हेर्नुहोस
नेपालका लागि भारतबाट आयो डरलाग्दो खबर